ပန်းချီကားများ, Graphics | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: ပန်းချီ, Graphics
Boris Valeggio များ၏ရုပ်ပုံများလိုပဲ။ အမှုတော်တို့ကို၏ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရနိုင်သနည်း မိမိအအတ္ထုပ္ပတ္တိ၏မှတ်သားလောက်?
ငါ Boris Valeggio ၏ပန်းချီကားများကိုကြိုက်တယ် သူ၏လက်ရာများအနက်မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သနည်း။ သူ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာထူးခြားသနည်း။ Boris Vallejo သည်ပီရူးနိုင်ငံ၊ Lima တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးသူ့ဖခင်သည်အောင်မြင်သောရှေ့နေဖြစ်သည်။
ရာစုနှစ် portraitists နှင့်ရှုခင်းပန်းချီဆရာများ 19 ပြောပြ
၁၉ ရာစု၏ပုံတူပန်းချီကားများနှင့်ရှုခင်းများပန်းချီဆရာများက ၁ - Jose Maria Velasco ၁၈၄၀-၁၉၁၂ ရှုခင်းပန်းချီဆရာ - မက္ကဆီကန်လက်ရာများ ၂ Alexey Tyranov 19-1 - ပုံတူပန်းချီဆရာ 1840-Isaac Levitan 1912-2 - ရှုခင်း၏အဓိကပန်းချီဆရာ 1808-Valentin Serov-1859-3 - ပုံတူပန်းချီဆရာ 1840- Vasily Petrovich Vereshchagin-1900-4 ပုံတူပန်းချီဆရာ 1865-Vasily ...
ဗန်ဂေါ့၏ပန်းချီကားမှာ“ Wheat Field with Crow” ပန်းချီကားသည်မည်သည့်အရာများဖြစ်သည်။ ပန်းချီအကြောင်းကျွန်တော်သိပ်မသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်အဲဒါဟာဈေးအကြီးဆုံးလဲ
Van Gogh ၏ "Wheat Field with Crow" ပန်းချီကားသည်အဘယ်အရာကိုသယ်ဆောင်ထားသနည်း။ ငါပန်းချီကားအကြောင်းသိပ်မသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒါကယူကရိန်းရဲ့ဈေးကြီးတဲ့အလံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးနှင့်တစ် ...
ရုရှားအနုပညာရှင်? ကအကျော်ကြားဆုံးမှနှစ်လိုဖွယ်ပါ! ကျေးဇူးပြုပြီးရေးရန်: ရုရှအနုပညာရှင်, ကောင်းစွာ, သူတို့ရဲ့အမည်များအမည်များဖြစ်ကြသည် !!!
ရုရှားအနုပညာရှင်တွေလား ဖြစ်နိုင်ရင်အကျော်ကြားဆုံး! ကျေးဇူးပြု၍ ရုရှားအနုပညာရှင်များထံစာရေးပါ။ သူတို့၏အမည်များသည်နာမည်များဖြစ်သည် !!! XVIII ရာစု၏ရုရှားအနုပညာရှင်တွေဟာ ၁၉ ရာစုမှရုရှားအနုပညာရှင်များ၏စီမံချက်၏အုပ်ချုပ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပိတ်ဆို့ထားသည် http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html Great artist ...
ဘယ်လိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တစ်ပုံစံတည်းစက္ကူ toned ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
စက္ကူကိုဘယ်လိုအညီအမျှအရောင်တင်နိုင်မလဲ။ အကောင်းဆုံးကတော့ရေမြှုပ်တစ်ချောင်းနှင့်စာလျှင်၊ အကယ်၍ စက္ကူမကြီးလွန်းပါကပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးမြန်ဆန်သည်။ :-)) စက္ကူတန်ချိန်တစ်ခုသည်သေချာသောဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်စတင်သည်။
မည်မျှခန်းက Tretyakov ပြခန်းရှိပါတယ်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်
Tretyakov ပြခန်းတွင်ခန်းမမည်မျှရှိသည်နှင့် Tretyakov ပြခန်းတွင်ခန်းမ ၁၀၆ ခုရှိသည်။ ပြခန်း၏စုဆောင်းမှုကိုပန်းချီ၊ ဂရပ်ဖစ်၊ အိုင်ကွန်ပန်းချီနှင့်ပန်းပုအဖြစ်ခွဲထားသည်။ အခန်း ၆၂ ခန်းတွင်တည်ရှိသော Lavrushinsky လမ်းကြမ်းရှိэкспозиမှုကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည် ...
အဆိုပါ Impressionist ၏ရုရှားအနုပညာရှင်?
ရုရှား impressionist ပန်းချီဆရာများလား တကယ်တော့ဖြစ်ကောင်း Korovin ပဲ။ Borisov-Musatov, Lanceray Petrovsky-Rakinton ရုရှားစိတ်ကူးစိတ်သန်းသည် ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းအစောပိုင်းရုရှားပန်းချီဆရာများ၏လက်ရာများအတွက်သမားရိုးကျနာမည်ဖြစ်သည်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုက ...
Francisco Goya "သူပုန်များကိုမေလ ၃ ရက်၊ ၁၈၀၈ ခုနှစ်ညတွင်ပစ်ခတ်ခြင်း" ပန်းချီကားကိုဖော်ပြပါ
Francisco Goya Aaaaa“ သူပုန်များကို ၁၈၀၈၊ မေလ ၃ ရက်ညတွင်ပစ်ခတ်မှု” ပန်းချီကားကိုဖော်ပြပါ။ ၁၈၀၈၊ မေလ ၂ ရက်တွင်မက်ဒရစ်တွင်မျိုးချစ်ပုန်ကန်မှုများကိုစပိန်ကိုသိမ်းပိုက်ထားသောပြင်သစ်တပ်များကရက်ရက်စက်စက်နှိမ်နင်းခဲ့သည်။ ချက်ချင်း…
ဂီတပန်းချီကားကဘာလဲ။ ATP ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာနေ့စဉ်တေးဂီတကရေပန်းစားနေပေမယ့်မျက်မြင်မရ၊ မမြင်ရတဲ့၊ ပေါ်ထွက်လာတာကိုယေဘုယျအားဖြင့်လက်ခံပါတယ်။ ငါတို့…
Palm tattoo ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ချောင်းပေါ်မှာတက်တူးထိုးချင်တယ်၊
Palm tattoo ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ကျွန်ုပ်၏လက်ချောင်းပေါ်တွင်ထိုသို့သောတက်တူးထိုးလိုသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ Palm tattoo ထူးခြားသောသစ်ပင်ထူးဆန်းသောသစ်ပင်ကြောင့်အောင်မြင်မှု၊ ဘုန်းအသရေ၊
Jasper .. Sardis .. Smagd - ဒီကျောက်ခဲတွေကဘာတွေလဲ။ ဘာအရောင်လဲ? သူတို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
Jasper .. Sardis .. Smagd - ဒီကျောက်ခဲတွေကဘာတွေလဲ။ ဘာအရောင်လဲ? သူတို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ Libra, Virgo, Gemini တို့၏လက္ခဏာများအတွက်သင့်တော်သည်။ agate နှင့်မတူညီသောအနည်အနှစ်များသောကျောက်များ၊
Alle Alphonse သည် Vivienne ပြခန်းတွင်“ နက်ရှိုင်းသောဂူထဲမှဂူထဲမှ Negroes ၏တိုက်ပွဲ” ပန်းချီကားကိုပြသထားသည်။ ဤပန်းချီကားကားအဘယ်နည်း။
Alle Alphonse သည် Vivienne ပြခန်းတွင်“ နက်ရှိုင်းသောဂူထဲမှဂူထဲမှ Negroes ၏တိုက်ပွဲ” ပန်းချီကားကိုပြသထားသည်။ ဤပန်းချီကားကားအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးဖြစ်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်သည်အသစ်ကိုကောင်းစွာမေ့သွားသည်။ ပြင်သစ်လူမျိုးကနောက်ပြောင်တယ်၊
နှင့်မည်သို့ gouache နှင့်အတူတစ်စိမ်းအရောင်ဖန်တီးနည်း
gouache နှင့်အတူစိမ်းအရောင်ဖန်တီးရန်ဘယ်လို? အစိမ်း၊ အပြာ၊ အဖြူ ... ရောနှော .. Turquoise ဖြစ်လိမ့်မည် .. ငါလုပ်ခဲ့တယ်။ စမ်းသပ်မှုနှင့်သင်အပြာအနည်းငယ်အဝါရောင်ရလိမ့်မယ် ... ။ ဒီထက်နည်းနည်းတော့ ...
ကျေးဇူးပြု၍ manga "cat paradise" နှင့်လင့်ခ်တစ်ခုချပြီး Vanilla နှင့် Chocola လည်းရှိသည်။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ manga "cat paradise" နှင့်လင့်ခ်တစ်ခုချပြီး Vanilla နှင့် Chocola လည်းရှိသည်။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါချောကလက်တွေကိုကြိုက်တယ်။ မေးခွန်းအပိုင်းကအတူတူမဟုတ်ဘူး။ Vanillin နှင့် Chakolin (သို့) တစ်ခုခု))) http://animult.net/mangas/cat-paradise Manga Gakuen Sousei ...
ခရမ်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ဒီအရောင်တွေကဘာတွေလဲ။ သင်ကဘာလဲ? ဤရွေ့ကားကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ! ခရမ်းရောင်ဟာ lilac နဲ့တူတယ်။ သို့သော်ခရမ်းရောင်နှင့်နှင်းခြယ်များသည်အရောင်တူ (ပန်းရောင်) ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဒီအနုပညာအမျိုးအစားရဲ့နာမည်ကဘာလဲ? ... လမ်းအနုပညာသို့မဟုတ် Graffiti Vandalism :) ဂရပ်ဖစ်ကိုအလားတူပုံစံဖြင့် Banksy ရေးဆွဲထားသည်။ Graffiti Graffiti - အကောင်းဘက်ကလုပ်တယ်။ သင့်အိမ်ရှိနံရံများသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖတီများပေါ်တွင်ရေးဆွဲထားခြင်းများ ...
ပန်းချီကား“ Crying Boy” ပန်းချီကားကိုသူမဘာသိထားလဲ။
ပန်းချီကား "Crying Boy" ပန်းချီကားကိုသူမဘာသိထားလဲ။ ၁၉၈၅ နှစ်လယ်လောက်တွင်ထူးဆန်းစွာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သောမီးများအကြောင်း ...
ပုံတူများနှင့်ကဗျာ။ , ပုံတူများနှင့်ကဗျာပေါင်းစပ်ငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါ! ခေါင်းစဉ်နဲ့စာရေးဆရာ
ပုံတူနှင့်ကဗျာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးပုံတူနှင့်ကဗျာပေါင်းများစွာကိုပြောပြပါ။ ခေါင်းစဉ်နှင့်စာရေးသူအေ Pushkin "Zhukovsky ၏ပုံတူ" ကျွန်ုပ်သည်လူကြီးမဟုတ်၊ ငယ်လည်းမဟုတ်၊ သိသိသာသာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်။
အနီရောင်သည်အဝါရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်လား? အနီရောင် Chervony - အနီရောင်။ နီနီရောင်နီ။ အနီရောင်အားဖြင့်အဝါရောင်ထက်အဝါရောင်ထက်အနီရင့်ရောင် chervonny: ၁) ကြိမ်မြောက်၊ ၁ ။ နီနီ၊
Leonardo da Vinci အားဖြင့် Mona Lisa ကိုတစ်ဦးတည်းအသက်ဘယ်လောက်ခြယ်နှုတ်ခမ်း?
လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီသည် Monet Lisa ၏နှုတ်ခမ်းကိုသာဘယ်နှစ်ခါရေးဆွဲခဲ့သနည်း။ Leonardo's TITY မှာရှိသလား။ လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီသည် ၁၂ နှစ်နီးပါးနှုတ်ခမ်းပန်းချီများကို“ Mona ... ပန်းချီရေးဆွဲခဲ့သည်။
78 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,166 စက္ကန့်ကျော် Generate ။